Momba anay - Mission Amber
Momba an'i Amber
Factory & taratasy fanamarinana
Maninona no mifidy Amber
"Ny tsara indrindra amin'ny jiro eny ivelany
Mitondrà ambiansy sy filaminana amin'ny fiainanao any ivelany "
Amber Lighting dia orinasa teknolojia avo lenta naorina tamin'ny taona 2012. Hatramin'ny nananganana anay tamim-panetren-tena dia nanome vahaolana sy vokatra azo hazavaina "mahay sy azo antoka" ho an'ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao ny fifantohanay.
Nandritra izay 8 taona lasa izay dia nanao jiro eny an-toerana, jiro rindrina, jiro paositra, jiro tselatra, jiro zaridaina, jiro bollard, jiro.
Miaraka amin'ny fitakiana sy ny haitao vaovao tonga eo amin'ny fiainantsika dia manome hazavana marani-tsaina miaraka amina asa vaovao koa isika izao, toy ny jiro miovaova loko RGB, jiro wifi na Alexa mifehy, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro.
Manamboatra vokatra namboarina ihany koa izahay. Amin'ny fandefasana aminay ny sary sy ny refy, afaka manamboatra ny volavola izahay, manokatra ny bobongolo ary manao ireo vokatra ho anao.
Iza no iasantsika
Matoky izahay fa miaraka amin'ny fiaraha-miasa ataonay, dia hanana traikefa miavaka ianao. Manantena hafatra izahay ary manontany manerana an'izao tontolo izao.
♦ Tompon'ny marika
♦ Mpivarotra ambongadiny
♦ Orinasa mpivarotra
♦ Ireo mpandraharaha amin'ny tetik'asa
Ahoana ny fitomboantsika
Miasa ho anao izahay ary miara-maniry aminao izahay.
Fototry ny ambers
Nanomboka nitondra orinasa i Amber ho toy ny orinasa kely miaraka amina ekipa teknika matihanina.
Fanitarana ny tsipika fivoriambe
Rehefa vita ny yea roa, nanamboatra milina SMT sy tsipika fivoriambe 3 izahay. Manana matihanina bebe kokoa izahay hanatevin-daharana ny ekipanay, ary manana varotra indroa izahay raha oharina tamin'ny taona lasa.
Miaraka amin'ny filàn'ny jiro fanaingoana namboarina manokana, fa tsy mankany amin'ny laboratoara hafa hanaovana fitiliana, dia nanangona ny laboratoara anay ihany izahay.
Fampivoarana ny faritra misy jiro vaovao
Miara-miasa amin'ny mpamatsy mpandrindra vaovao izahay hahazoana vahaolana maivana amin'ny jiro, manamboatra ny jiro RGB izahay, jiro voafehy wifi, jiro masoandro miaraka amin'ny sensor.
Adiresy: Zouqu Town, Distrikan'i Zhonglou, Changzhou City, faritanin'i Jiangsu, Sina